यो हो विश्‍वकै महँगो तरकारी, प्रतिकिलो २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ ! - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider स्वास्थ्य यो हो विश्‍वकै महँगो तरकारी, प्रतिकिलो २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ !
यो हो विश्‍वकै महँगो तरकारी, प्रतिकिलो २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ !
एजेन्सी, अहिले काठमाडौं उपत्यकामा कुनै तरकारी धेरै महँगो भएमा सय रुपैया माथि पुग्छ। यस्तै कुनैको मुल्य दुईसयसम्म तर सिजन हटेपछि उक्त तरकारीको मूल्य पनि विस्तारै घट्दै जान्छ। तर विश्‍वमा एउटा यस्तो तरकारी जसको मूल्‍य सुनैर नै किन्‍ने जोकोही पनि छक्क पर्न सक्छौ।
एउटा यस्तो तरकारी जसको नाम गच्छी र यसको मूल्य प्रतिकिलो २५ हजारदेखि ३० हजार रुपैया रहेको छ। यो प्राय हिमाञ्‍चल र काश्‍मीर तथा हिमालयको उच्च भागमा पाइन्छ। यो तरकारी पहाडमा विजुली चम्किएपछि बरफको बाट निस्किन्छ।
यो दुर्लभ तरकारी पहाडमा जोगीहरुले खोजेर ल्याउने गर्दछन्। यसलाई बनाउने विधि ड्राइफूडमा सागमा अनि घिउँमा समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ। धेरै मिष्ठान्‍नमा समेत प्रयोग गरिने यो तरकारी औषधिको रुपमा समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसको वैज्ञानिक नाम भने मार्कुला कस्क्यूप्लेटा हो। यो एक प्रकारको च्याउँ जस्तै हो।
प्राकृतिक रुपमा जंगलमा पाउने च्याउ प्राय जाडो महिनादेखि पाउन सकिन्छ। ठूलो ठूलो कम्पनीले यसलाई १० देखि १५ हजार मूल्‍यमा किन्‍ने गरेका छन्। तर बजारमा आउँदा यसको मूल्‍य २५ देखि ३० हजार रुपैयाँमा विक्री वितरण गर्ने गरेका छन्।